Idemokrasi ithetha “urhulumente wentando yabantu”. Abantu ngoko ke banelungelo lokuthatha inxaxheba kwiinkqubo zikamasipala kwanokuba iimbono zabo mazinikwe ingqwalaselo. Urhulumente wezasekhaya udlala indima ebalulekileyo ekuququzeleleni uthatho-nxaxheba loluntu. IsaHluko 4 soMthetho weeNkqubo zikaMasipala (Chapter 4 of the Municipal Systems Act) ufuna oomasipala ukuba babandakanye uluntu kwiinkqubo zokwenziwa kwezigqibo kunye nokubonisana kwanentsebenziswano noluntu.
Ngokwalo Mthetho, uluntu lwasekuhlaleni lunelungelo lokufaka igalelo ekwenziweni kwesigqibo, ukungenisa iingcebiso nezikhalazo kwibhunga likamasipala, ukwaziswa ngeentlanganiso nezigqibo zebhunga, ukuchazelwa ngemibandela yebhunga, kwanokuya ezintlanganisweni. IsaHluko 4 salo Mthetho sifuna ukuba ingcaciso mayifumaneke kubo bonke abantu.
Ezi nkqubo zithile, ezifuna uluntu ukuba luthathe inxaxheba, zezi:
1. Ukuyilwa komthetho okanye kwemimiselo kamasipala;
2. Ukuyilwa kweziCwangciso zoPhuhliso eziZimeleyo (Independent Development Plans);
3. Imiba yezemali, umzekelo, ukuqulunqwa kwebhajethi, ukwenziwa kweemvumelwano noBuhlakani phakathi kukaRhulumente namaShishini aBucala (Public Private Partnerships), kunye nokumiselwa kwamaxabiso amiselweyo neerhafu zepropati;
4. Ulawulo lwentsebenzo.
Uthatho-nxaxheba kwiikomiti zeewadi
Ikomiti yewadi liqonga apho sinako ukuthatha inxaxheba ngeyona ndlela ingcono iyiyo kumasipala. Kukho izikhokelo ngokubanzi ngokubhekisele kwindlela yokuziphatha thina ubuqu. Kufuneka sikulungele yaye siqokelele yonke ingcaciso eyimfuneko ngokubhekisele kwisihloko esifanelekileyo. Kufuneka kwakhona sithethe ngokuzolileyo, sihloniphe isikhokelo sikasihlalo yaye sizithathele ingqalelo ezinye iimbono zabanye abantu. Xa kufakwa isikhalazo, kufuneka sinike ingcombolo kangangoko kunako.
Ungafunda ngaphezulu ngokuthatha inxaxheba kwiinkqubo zikamasipasala apha: